Izixhobo zoyilo lwegraphic | Abadali be-Intanethi
Izixhobo zoyilo lwegraphic
Uninzi lwabayili begraphic banezinto ezininzi ezifanayo, kwaye ezi zizinto abazisebenzisayo. Impumelelo yomyili wegraphic iya kuxhomekeka kakhulu kumdlalo awufumana kuzo zonke ezi zinto kunye nolwazi.
Iimathiriyeli zisenokungabi yiyo eyenza umzobi wegraphic woyikeka, kodwa zinjalo. Baza kukunceda kwindlela yakho yokuba ngumsebenzi olungileyo. Siqokelele izinto ezisi-8 eziyimfuneko ezidingwa ngumyili wegraphic.
1 8 imathiriyeli yoyilo lwegraphic
1.2 I-hard drive yangaphandle
1.3 Ipensile nephepha
1.4 Ifowuni enye
1.8 Indawo yokusebenza etofotofo
8 imathiriyeli yoyilo lwegraphic
Iimathiriyeli umyili wegraphic ufuna utshintsho ngokusekwe kwizinto ezininzi eziguquguqukayo, nokuba yindlela yabo yokusebenza okanye indawo abakuyo. Kodwa ngokuqhelekileyo Ezi zixhobo esikubonisa zona ngezantsi ziyintsika esisiseko ukuze uphuhlise umsebenzi wakho kwaye uqhubeke ukhula.
Sesinye sezixhobo ezinobunzima ngakumbi kolu qeqesho, ekubeni indawo yomzobo ibhekisa kwizixhobo zedijithali, nokuba yikhompyuter okanye ithebhulethi. Ngokuphathelele imodeli yekhompyutheni, iyahluka ngokuxhomekeka kwizinto ezithandayo zomntu ngamnye, zombini i-Apple kunye nayiphi na enye i-brand ineekhompyutheni ezinamandla ukuze zikwazi ukusebenza kunye nezixhobo zokuyila. Fumana ukuba yintoni kanye kanye oyifunayo kunye nento ongathanda ukuba ikhompyuter yakho ibe nayo. Oku kuyahluka ngokuxhomekeke kwisoftware, izixhobo kunye nezixhobo.
Laptop okanye desktop? Siyakunceda
Nangona ubukhulu becala ikhompyuter yolu qeqesho ibalulekile kuphuhliso lwemisebenzi, Iya kukunceda nakwicandelo lophando kunye nemfundo. Ewe namhlanje, abantu abaninzi basebenzisa le ndlela yokuphanda umsebenzi wabanye abayili, njengesalathiso okanye njengokhuphiswano. Ukongeza, kwi-Intanethi uya kufumana inani elikhulu lezifundo onokwandisa izakhono zakho.
I-hard drive yangaphandle
Isoftware yoyilo ihlala ithatha indawo enkulu kwikhompyuter yakho. Koku kufuneka wongeze umsebenzi ngamnye owenzayo, odla ngokuthatha enye indawo ebalulekileyo yokugcina ikhompyutha yakho. Ngale nto ndifuna ukukuxelela ukuba ukuba ne-hard drive yangaphandle, Kuya kukunceda ukuba ukhuphe ikhompyuter yemisebenzi enokuthi ithathe ixesha elide kwaye ayihambelani kangako. Kuya kuba luncedo ukwenza iikopi zogcino lweeprojekthi ezixeliweyo okanye nokuba ufuna ukuzigcina njengenkumbulo. Okukhona ikhompyuter yakho inokugcinwa okuninzi, kokukhona ingcono ukusebenza kwayo.
Ngokuxhomekeke kumyili oyicelileyo, baya kukuxelela ukuba isiseko sabo senkxaso yikhompyuter okanye iphepha. Sele ndikucacisele ngaphambili, ukubaluleka kokuba nekhompyuter elungileyo. Kodwa iphepha liseyinkxaso ebalulekileyo. Nangona ikhompyuter inolawulo oludumileyo lweZ, ukuzoba ngokubonakalayo kuya kukuvumela ukuba unikezele ngokukhululeka ngakumbi kwiimbono ezivelayo. Ngamanye amaxesha, ukusetyenziswa kwezixhobo zombane kusenza sigqibele sihluthi kwaye asikwazi ukuqhubela phambili nombono wethu. Ngoko ke, kuhle ukubuyela kule ndlela yemveli. Umzobo ngephepha kunye nepensile uya kukunika inkululeko engakumbi.
Ungayifumana imangalisa into yokuba ndikhankanye ukuba ifowuni yinto ebalulekileyo kumyili wegraphic. Kodwa esi sixhobo yindlela ekhawulezayo yokugcina unxibelelwano nabathengi kunye nabanye abayili. Kwakhona Kuya kukunceda ulungelelanise kwaye ufumane inkuthazo, kuba kule mihla inqabile iwebhusayithi engenaso isicelo seselula. Amaphepha afana ne-Behance, i-Pinterest okanye i-Instagram ngumthombo omkhulu wokuphefumlelwa.
Ukuthatha imifanekiso ngamaxesha athile nako kuya kusebenza njengomthombo wenkuthazo, kukho amaxesha apho singenalo ixesha lokugcina umbono, kwaye ukuthabatha loo mzuzu kuya kusinceda ukuba siwuhlaziye kamva. Ukuba ubona i-typography, uyilo okanye into oyithandayo, lixesha elifanelekileyo lokuthatha ifoto. Mhlawumbi loo ntyatyambo ibibonakala inomtsalane kakhulu ekuqaleni, iya kukunceda kamva wenze ipalethi yombala oza kuyisebenzisa kwiprojekthi yakho.
Iincwadi zingumthombo omkhulu wolwazi, kuba akuyiyo yonke into ebhalisiweyo kwi-intanethi. Kuyafuneka ukuba ufunde, uhlalutye, kwaye ufunde ngalo lonke ixesha ufumana ithuba. Mhlawumbi uya kufumana ulwazi oluninzi kwiincwadi, izikhokelo kunye namanqaku abhalwe ngabanye abachwephesha kweli candelo. Nali ikhonkco kwisithuba malunga iincwadi umyili womzobo akanakuyeka ukuzithenga. Ngabo unokwandisa eyakho Ulwazi nentelekelelo njengomyili wegraphic.
Un izibukoafolio es una coleccivuliwe de trabajos que yeneneizamos a lo umbunguo del tohpo, nge el ukuze sibonise amandla ethu, ubuchule kunye namava. Es una Ndodaxesha de xuabucala ngasekhohlorar tus haibhilidintando a Los Umxhasies, en la ngokweneneinto Esto es muy ebalulekileyoe, la khuphisanaintlaka es Grande y las umntuas seleccionan quKulungile ikhontrakthibopha y quKulungile hayi, en isiseko a Los trabajos que Unayo yeneneizkokuchitha. Es muy ebalulekileyoe tener una buenye ukucingaen y un buen portfolio, Esto te ayudará a que la giqumrhu kudalaa en ti, te de confjasonza y te quhamba ikhontrakthiiqhina.
PAra hi-acer enye egqibeleleyo tKulungilees que tener en cungaphakathi varias cosace. Te Recukuba phakathiisiphelo que te fijes kakhuluo en Los izibukofoliOS de Los isifoñadiintsimbi, leer isithuba sethu malunga ohlekisayoo hi-acer un buen portfolio, for tener izimvo y ngeocer alUmpuos trucos. PAra hi-acer enye Uya kudinga una págkwi Kwiwebhu, es una Ndodaxesha iyamangalisa kakhulu xuabucala ngasekhohlorar tu trabIgalikhi.
Kubaqulunqi, imfundo ayiyonto nje oyifumanayo xa ukumsebenzi okanye isidanga. Kodwa kwezinye iindlela zokuqhubeka nokufunda kunye nokuvela. Ezi ndlela zokufunda zinokuba zizifundo ze-intanethi ezigqibezela uqeqesho lwakho okanye izifundo zesoftware, ekubeni ezi zamva zihlaziywa rhoqo. Ukuhlala usexesheni kuya kwenza inkqubo yakho yokuyila kunye nezakhono kunye nezixhobo zoyilo ezimanzi kakhulu.
Indawo yokusebenza etofotofo
Nawuphi na umsebenzi kufuneka ube nendawo apho unokusebenza ngokukhululeka kwaye ukhuthazekile. Imalunga ne into ebaluleke kakhulu kwimpumelelo kunye nemveliso ukuphuhlisa. Indawo osebenza kuyo kufuneka ibe yindawo enokukhanya okuninzi kunye nendawo. Kucetyiswa ukuba ube neefestile ezinkulu kunye nezityalo. Ukuba nedesika enkulu kuya kwenza kube lula kuwe ukubeka zonke izixhobo ozifunayo. Nokuba idesktop icocekile okanye hayi, ixhomekeke kuwe.
Kukho abantu abasebenza ngcono kakhulu ngendawo yabo yokusebenza emdaka nokuba ibonakala ingakholeleki. Kukwacetyiswa ukuba imibala egqwesileyo kweso sithuba iyamangalisa kwaye icacile, ukuba ungumyili wegraphic uya kuba usesikhathini Ithiyori yombala.
Ngoku uyazi ukuba yintoni efunwa ngumyili wegraphic ukuphuhlisa umsebenzi wabo. Ngomonde kunye nokusetyenziswa kwezi zixhobo kuyilo lwegraphic, ngokuqinisekileyo ekugqibeleni uya kuba ngumyili obalaseleyo okanye umzobi. Phambili!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Izixhobo zoyilo lwegraphic
Uyitshintsha njani ifonti kwi-Instagram
Indlela yokwahlula ividiyo ibe ngamacandelo amaninzi